Akụkọ - Gini bu olile anya nke PVC plastic na-ebili elu?
Plasticlọ plastik PVC n'ihi iji ihe eji eme ihe bụ PVC na-agbanwe agbanwe na gburugburu ebe obibi, na usoro nke gburugburu ebe obibi taa, nwere ike ịsị na ọ bụ ụlọ ọrụ ọwụwa anyanwụ. Na-ele anya n’ọdịnihu, ị ga-enwe ebe a ga-etinye PVC plastic. Plastickwanyere plastic n'ala ga-abụ obere na ezi ndị na-eji ọtọ n'ala ka eluigwe na ala, ndị na-esonụ edemede nkenke ikwu banyere ịkwanyere plastic n'ala ụlọ ọrụ na-eme n'ọdịnihu nke China si ahịa mmepe na-emekarị
01 ọsọ ọsọ mmepe mepụtara
Ọnụ ego ndị China na-akwụ ụgwọ na akụrụngwa emeela ntọala siri ike maka ụlọ ọrụ ụlọ iji mepụta ụlọ ntanetị PVC. Ahịa buru ibu na uto ngwa ngwa nke ịchọ na-adọta ọtụtụ ụlọ ọrụ ịbanye na ụlọ ọrụ PVC plastic. A na-atụ anya na n’ime afọ ole na ole sochirinụ, ọnụego uto nke imepụta plastic na ntanaka ga-akarị nke ihe ọ bụla, wee bụrụ otu n’ime akụ na ụba na-eto ngwa ngwa.
02 wider nso nke ngwa
Na mgbakwunye na ebe ndị ọha na eze, PVC plastic floor bụ ihe dị nfe, ọkụ na-enwu ọkụ, ihe mgbochi mmiri, mgbochi skid na njirimara ndị ọzọ, na-eme ka ọ bụrụ ihe ịchọ mma kachasị ewu ewu n'ọdịnihu. Na mgbakwunye na iji ya n'ọtụtụ ebe, ọ ga-abanyekwa n'ahịa ụlọ mma na nnukwu mpaghara, a ga-agbatịkwu ngwa ngwa ya.
03 ihe nchebe gburugburu ebe obibi na ahụike
Site na njikarịcha na mmụba nke teknụzụ na teknụzụ nhazi, ịkwanyere ala plastik ga-abụ nchedo gburugburu ebe obibi na ahụike, nchekwa ga-emeziwanye ma melite, njikwa itinye n'ọrụ akụ ga-adị elu, na ụlọ plastik PVC ga-abụ nke kachasị ewu ewu na-emegharị akwa ihe eji achọ mma.
04 chọrọ teknụzụ chọrọ dị elu ma karịa
Ihe ndị a na-akparaghị ókè maka nchekwa nke ihe eji achọ mma na ịchụso ihe ịchọ mma ga-agbanwe usoro nrụnye dị mfe nke PVC plastic dị ugbu a. Iji gosipụta ihe ịchọ mma dị mma nke PVC plastic, ụlọ ọrụ teknụzụ nke ụlọ ọrụ na ndị ọrụ nrụnye ga-adị elu ma dị elu, nke ga-akwalite teknụzụ teknụzụ nke PVC plastic floor tozuru etozu na ụlọ ọrụ ahụ tozuru oke.
Ulo oru ndi ulo oru 05 nke oru doro anya karie
Yiri usoro mmepe nke PVC ụlọ ụlọ na-arụ ọrụ n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ụdị ndị a na-ebubata nwere usoro ịhazi na usoro nhazi na usoro ntinye, na nkewa ọrụ ha doro anya. Ndị na-ebunye ngwa ahịa ahụ maara ihe na arụmọrụ nke ọma, yabụ ha bụ ndị na-ahazi ụlọ ọrụ kachasị mma, ma bụrụkwa otu n'ime njirimara kachasị dị mkpa nke ụlọ ọrụ ụlọ ntanye PVC ụlọ. N'ime afọ ole na ole sochirinụ, ụlọ ọrụ mmepụta ụlọ PVC ụlọ ga-abụ otu. Ha agaghị abụ naanị ndị na-ebu ngwaahịa PVC ala, kamakwa ndị na-akwado ụlọ kachasị mma nke PVC plastic.
06 ulo oru ulo oru ike
N’agbanyeghi na enwebeghị mbadamba ihe owuwu PVC na China ogologo oge, njirimara mpaghara ya pụtara ìhè nke ọma ma ụlọ ọrụ ahụ na-etinyekarị uche. E guzobere ọtụtụ ntọala ụlọ ọrụ na Hebei, Beijing, Jiangsu, Shanghai na Guangzhou. Na-aga n'ihu mgbasa nke mmepụta ọnụ ọgụgụ nke anụ ụlọ ika ụlọ ọrụ, na ulo oru ịta a ga-ọzọ ike, na na naanị ga-esiwanye ike, na-akwalite imekọ ihe ọnụ na mwekota n'etiti ọrụ.
Ala, Pvc Ogbo flooring, Ala Kapetị Roll, Anu anu ogu anu ulo Pet, Pvc Kapetị, Pet Ogbo ulo,